Brick FanaticsLEGO အစု ၂၀ စာရင်း - Brick Fanatics
Brick FanaticsLEGO ထိပ်ဆုံး ၂၀ စာရင်း
အပူဆုံး၊ ဝယ်လိုအားအများဆုံးနှင့်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည် Lego နှင့်အတူစုံ Brick Fanatics'' ထိပ်တန်း 20 Lego စာရင်းသတ်မှတ်သည်
ဤမျှလောက်များစွာသောနှင့်အတူ Lego လစဉ်ထုတ်ပြန်သောအစုံလိုက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခဲယဉ်းသည် - ဘတ်ဂျက်အတွက်မဆိုထားနှင့် - အရာရာတိုင်းကိုခြေရာခံရန်ခက်ခဲသည် Lego Group မှထွက်ထားပါတယ်။ အချို့သောအစုံများအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြန့်ချိသည့်အချက်၊ အခြားသူများအတွက်ကြိုကြားကြိုကြားကြိုတင်သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏနှင့်အစုံအားလုံး၏သက်တမ်းသည်သက်တမ်း အမြဲတမ်း အငြိမ်းစားနှင့်များစွာသောအနာဂတ် classic, ဒီဇိုင်းအောင်ပွဲသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်သင့်ရဲ့နှာခေါင်းအောက်မှာထိုင်နိုင်ပါတယ်, လွဲချော်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် eBay အပေါ်နှစ်ဆစျေးနှုန်းသာ။
ဒါကဘယ်မှာင် Brick Fanatics'' ထိပ်တန်း 20 Lego စာရင်းသတ်မှတ်သည် အတွင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အလုအယက်လား? ဤတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထိပ်တန်း ၂၀ (အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၂၁)
Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Disney 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
စူပါမာရီယို 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Star Wars 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု 10281 Bonsai သစ်ပင် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Ninjago ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Ideas 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Star Wars ၇၅၃၀၈ R75308-D2 - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Art 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
လူကြီးများအတွက် Lego 10295 Porsche 911 - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
လူကြီးများအတွက် Lego 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Ideas 21318 သစ်ပင်အိမ် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
လူကြီးများအတွက် Lego 10292 အဆိုပါ Friends Apartments - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Creator 3-in-1 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
Ideas 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို - ဆက်ဖတ်ရန် - အခုဝယ်ပါ
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးဝါသနာအရစိတ် ၀ င်စားမှုကိုရှာဖွေရန်ပထမဆုံးအကြိမ် ၀ ယ်သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်art သို့မဟုတ်သင်အထူးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုရှာနေသည် Lego မင်းဘဝမှာပန်ကာ။ သင်ဟာတန်ဖိုးအတွက်၊ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့တည်ဆောက်ပုံအတွေ့အကြုံနှင့်သင်၏နောက်လာမည့်မှကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ပြသမှုကိုရှာဖွေရန်စိတ်အားထက်သန်သည့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်နိုင်သည် Lego အစုံ သို့မဟုတ်သင်ကအဆုံးစွန်နှင့်အတူကွေးရှေ့တွင်ဆက်နေရန်စိတ်အားထက်သန်သောအလေးစားအုတ်ဝါရင့်ဖြစ်ကြသည် Lego စုဆောင်းမှု။
သင်သည်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုအပြီးတွင်ရှိပါသလား၊ စုဆောင်းသူ၏စာရင်းသို့မဟုတ်စျေးဝယ်ခြင်းအကြံဥာဏ်များပင်ဖြစ်ပါစေ၊ Brick Fanatics'' ထိပ်တန်း 20 Lego စာရင်းသတ်မှတ်သည် အလွန်အကောင်းဆုံး, အမြန်စဉ်းစားခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ် Lego လက်ရှိရရှိနိုင်အစုံ။
ဤစာရင်းကိုပုံမှန် update လုပ်ပြီး UK version အတွက် stock များအဆင့်သတ်မှတ်သည် LEGO.com (နိုင်ငံတကာစတော့ရှယ်ယာအဆင့်ဆင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်) ။ ပံ့ပိုးမှု Brick Fanatics'' ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအဝယ်ယူခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှတဆင့်ဤအဖြစ်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ တစ်ခုအနေနှင့် အမေဇုံ အရည်အချင်းရှိသော ၀ ယ်ယူမှုများမှကျွန်ုပ်တို့တွဲဖက်
theme: Star Wars စျေးနှုန်း: £ 649.99 / $ 799.99 / € 799.99 အပိုင်းပိုင်း: 7,541 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးမူလ Ultimate Collector Series ၁၀၁၇၉ ထောင်စုနှစ် Falcon ၏အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ခဲ့သည် Lego ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းကိုတစ်ခုဖမ်းမိသော minifigure စကေးအဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာ၌တည်၏ Star Wars မူလ trilogy ပာ၏အထင်ကရသင်္ဘောများ။ ပြီးနောက်လေးကိန်းဂဏန်း aftermarket စျေးနှုန်းများတစ် ဦး အပြည့်အဝ 10 နှစ်, အ Lego 2017 သည်စက်တင်ဘာလ XNUMX နှင့်အတူအပြည့်အဝဒီဇိုင်း, ပြန်လည်ပြုပြင်နှင့် UCS ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ၎င်း၏ ၇၅၄၁ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုအသေးစိတ်နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအလွန်များပြားသောအိတ်များပေါင်းစုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်၏အဆင့်အတန်းနှင့်အညီနေထိုင်သည်ထက်ပိုများသည်။ ၁၀၁၇၉ ဈေးနှစ်ဆမှာ ၇၅၁၉၂ ဟာပထမနေရာမှာရောင်းခဲ့ရတယ် နာရီ ဖြတ်ပြီး VIP ၏ Lego ဝယ်လိုအားဖမ်းမိအဖြစ်သာစတိုးဆိုင်, ထိုပထမ ဦး ဆုံးခရစ္စမတ်၏ရှေ့၌သာမကြာခဏပြန်ပေါ်လာမီ Lego အံ့အားသင့်ခြင်းဖြင့်အုပ်စု။
(မကြာခဏစတော့ရှယ်ယာနှင့်ထွက်ကျဆင်းနေ) ကတည်းကကတည်းကနှစ်များတွင်တည်ငြိမ်ရောင်းချသူထက်ပို 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ကြီးမားတဲ့တစ်ခုပါ၊အခုဒုတိယမည်သည့်တစ်ခုတည်း၏အကြီးဆုံးအပိုင်းအစအရေအတွက် Lego သတ်မှတ်ထားနှင့်ဘတ်ဂျက်သည်။ ငါတို့အားလုံးသည်လူတစ် ဦး ချင်းကိုမွေ့လျော်ရန်အလုံအလောက်ကံကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ သို့သော်အမှန်တကယ်ကြီးမားသောထိုအစုကိုသိမ်းဆည်းထားသူများအတွက်၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံမှသည်တန်ဖိုးကိုဖော်ပြရန်အထိသင်ထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည့်တိုင်အဆင့်တိုင်း၌ဆုချလိမ့်မည် ဒါကြောင့်များအတွက်အာကာသစေရန်ဆိုဖာ။ ဒါဟာအစဖြစ်ခဲ့သည် အနားယူဖို့ကောလဟာလ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ခန့်အနားယူနေပုံရသည်။
2 - Disney 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်
theme: Disney စျေးနှုန်း: £ 299.99 / $ 349.99 / € 349.99 အပိုင်းပိုင်း: 4,080 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
မျက်တောင်ခတ်ပြီးသင်သတိထားမိလိမ့်မည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် နောက်ကျောစတော့ရှယ်ယာပြန် Top 20 စာရင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတစ်လအကြာ၌ဝေါလ်အလယ်၌စင်ဒရဲလား၏နေအိမ်ကိုအလေးချိန် ၄,၀၈၀ ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ Disney ကမ္ဘာကြီးသည်စတော့ရှယ်ယာထဲ၌ ၀ င်ရောက်ထွက်ရှိသော ၄ နှစ်တာကာလအတွင်းကုန်ဆုံးခဲ့သည် LEGO.com။ ဒီပစ္စည်းဟာယူကေမှာပြန်ပြီးရရှိနိုင်ပေမယ့်အငြိမ်းစားအနားယူရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကန့်သတ်ထားသောအချိန်သာဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအပိုင်းအစအရေအတွက်နှင့်အတူ, 71040ဒီဇိုင်နာများကအသေးစိတ်တိုင်းကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည် DisneyWalt ၏အလယ်ပိုင်းတွင်အထင်ကရအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် Disney ကမ္ဘာနှင့်ဝေါ့ Disney ရုပ်ပုံများလိုဂို။ ရဲတိုက်၏အတွင်းပိုင်းကိုလည်းအခန်းများနှင့်အနည်းငယ်ညိတ်နှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည် classic Disney ဇာတ်ကောင်များနှင့်ရုပ်ရှင်များသည်အသေးအဖွဲဓာတ်ပုံငါးခုပါ ၀ င်ပြီးအပြီးသတ်မလွဲမရှောင်သာပေးစွမ်းသည် Lego အဘို့အတှေ့အကွုံမြား Disney မည်သည့်အသက်အရွယ်၏ပရိသတ်များ။ ငါတို့ကခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီထက်အများကြီးကြာအောင်ပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်နိုင်လို့ပါ။
3 - ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 Diagon Alley
theme: Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ စျေးနှုန်း: £ 369.99 / $ 399.99 / € 399.99 အပိုင်းပိုင်း: 5,544 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
စျေးအကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်း Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ယနေ့တိုင်အောင်ထားရှိပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးမျှော်လင့်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ကိုသတ်မှတ်သည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသော လူတိုင်းအတွက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီgigရာမအစုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လုံလောက်သောကံကောင်းပန်ကာသည်၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
2018 ရဲ့အလားတူသွေးကြော၌တည်၏ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ကျွမ်းကျင်စွာသို့ဘာသာပြန်ပေးသည် Lego တည်ဆောက်သူကိုချက်ချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသောအရင်းအမြစ်ကိုချစ်မြတ်နိုးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဆင့်တွင်မမေ့နိုင်ဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်။
၅,၅၄၄ အပိုင်းအစများနှင့်သီးခြား ၃၂ × ၁၆ အခြေခံပြားများအတွင်း Diagon Alley မှအမှတ်တရနေရာဒေသတစ်ခုလုံးရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောညိတ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုပ်ပိုးထားသည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာလန်ဒန်မြို့၏လျှို့ဝှက်ချက်တည်နေရာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒီသေးငယ်သောရုပ်ပုံဖန်တီးမှုကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်လေးစားရန်များစွာရှိသည် Lego ရလဒ်အနေဖြင့်အုပ်စုသည်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ ဒီစာရင်းကဒီစာရင်းမှာအရမ်းမြင့်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့။
4 - Super Mario 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်
theme: စူပါမာရီယို စျေးနှုန်း: £ 209.99 / $ 229.99 / € 229.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,646 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
စင်ကြယ်သော NES-talgia, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် တစ် ဦး မှမေတ္တာစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ် classic များစွာသောကလေးဘဝမှဂိမ်းစက်များ။ အဆိုပါ NES သည်၎င်း၏ 35 မှတ်သားအဖြစ်th 2020 ခုနှစ်တွင်နှစ်ပတ်လည်နေ့, အ Lego အုပ်စုသည်ဤအသေးစိတ်နှင့်တိကျမှုအစိတ်အပိုင်း ၂,၆၄၆ ကိုဖြတ်ကျော်သည် Lego အပန်းဖြေခြင်း၊ ဂိမ်း cartခေါင်, controller ကိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား။ အုတ်ပုံစံဖြင့်တိတိကျကျဖမ်းမိနိုင်သည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံသဏ္thisာန်သည်ဤအစု၏အတွေ့အကြုံ၏တင်သည့်စာမျက်နှာသာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ကစားခြင်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အပြန်အလှန်လိုက်ဖက်သောသဟဇာတဖြစ်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။artအများအပြား retro ဂိမ်း၏ညှို့။
ရုပ်မြင်သံကြား၏ဘေးထွက်လီဗာကိုလှည့်လိုက်ရုံဖြင့် 8-bit display screen ကိုအဆင့်တစ်ခုမှလှည့်သည် စူပါမာရီယို Bros. နေစဉ်နေစဉ် စူပါမာရီယို ကနေပုံ Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း ရုပ်မြင်သံကြားထိပ်တွင်ထိုဂိမ်းမှပင်စစ်မှန်သောအသံနှင့်တေးဂီတကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ဤသစ္စာရှိသူထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအသေးစိတ်မိနစ်တိုင်းမှဖြစ်သည် Lego များစွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားသူတစ် ဦး ၏ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း Lego အုပ်စုသည်နောက်ဆုံးတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားနည်းများအကြားတရားဝင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ တစ် ဦး တည်းသောအရာအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်တန်ဖိုးထားရန်များစွာရှိသည်။ 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်.
ငါတို့ယူခဲ့တယ် ဒီမှာ set ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုပါနှင့် အစစ်အမှန် NES ကနှိုင်းယှဉ် လွန်း။
5 - Star Wars 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
theme: Star Wars စျေးနှုန်း: £ 119.99 / $ 129.99 / € 129.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,023 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
မှာထုတ်ပြန်ကြေညာ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလနယူးယောက်ကစားပွဲပြပွဲ၊ ၇၅၂၉၂ သင်တုန်းမောက် ချက်ချင်းမှာကြိုတင်မှာယူဘို့ရရှိနိုင်လုပ်ခဲ့သည် LEGO.com ယူကေနှင့်ဥရောပတို့တွင်စက်တင်ဘာလတွင်ခြောက်လခွဲခွဲမထွက်မီ။ သာ နယူးယောက်ကနေဗီဒီယို နှင့်စိတ်မရှည်စွာကြည့်ဖို့တရားဝင်ပုံရိပ်, ကထံမှထံမှခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်ရဲ့သင်္ဘောများအတွက်ခုနစ်လကြာမျှော်လင့်ခဲ့ Disney+ စီးရီးအဆိုပါ Mandalorian ။
တကယ်တော့ ၇၅၂၉၂ ကိုတောင်နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်၊ 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မူပိုင်ခွင့်ပြissueနာကြောင့်။ အများကြီးနဲ့တူ အဆိုပါသင်တုန်းမောက် ပြပွဲမှာ၊ ဒီဟာကငါတို့ဆီကိုတောင်မ ၀ င်ခင်မှာလုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
75292 Mandalorian Bounty Hunter Transport / The Razor Crest များအတွက်သေတ္တာတွေအများကြီး tick Lego Star Wars အသစ်နှင့်အလွန်လူကြိုက်များအတွင်း၎င်း၏ကြီးထွားလာ, ဗဟိုအဆင့်ကနေပရိသတ်တွေ Star Wars အသေးစိတ်နှင့်ကစားနိုင်မှုများစွာကိုကတိပေး, မော်ဒယ်အဖြစ်၎င်း၏အရွယ်အစားမှပုံပြင်။ ဟုတ်ကဲ့, ကလေး Yoda ပါဝင်သည်။ နေ BrickHeadz နှစ်ချက် 75317 အဆိုပါ Mandalorian နှင့်ကလေး တစ်ချိန်တည်းမှာထုတ်ပေးပေါင်းတစ် ပိုကြီးတဲ့ SCAlအီး Baby Yoda တည်ဆောက်နိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ၇၅၂၉၂ ဆိုသည်မှာဒီမင်ဒိုရီယန်နိုင်ငံမှပိုမိုနက်ရှိုင်းသော၊ ပုံပြင်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အစုဖြစ်သည် Disney+ များစွာသောပြ Lego Star Wars ပရိသတ်တွေရှာနေ
၆ - Harry Potter6Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ စျေးနှုန်း: £ 229.99 / $ 249.99 / € 249.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,010 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
တတိယမြောက် ဟယ်ရီပေါ်တာ သုံးစွဲသူမှတိုက်ရိုက်စားသုံးသူသည်အခြားနှစ်ခုမှတစ်ခုကိုတွန်းမထုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ Top 20 သို့လျှောချခဲ့သည်။ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် - အဲတာကတကယ့်ကိုဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်းသေတမ်းစာသက်သက်ပဲ Lego အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်ကိုပြန်ယူလာကတည်းကကောင်လေး wizard ကိုကုသပေးခဲ့သည်။
ထိုယခင်နှစ်စုံသည် microscale နှင့် minifigure-scale သို့သွားခဲ့သည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု Hedwig ၏အုတ်အရွယ်အစားတည်ဆောက်ထားသော Wizarding World အရာဝတ္ထုများကိုစုပုံထားသောအသက်တာအပန်းဖြေခြင်းဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကိုသုံးသည်။
ဒါဟာတကယ့်ကိုအချစ်စာတစ်စောင်ပါ ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်အမှန်တကယ် Hogw တို့ပါဝင်သည်art၈ × ၁၆ အကွက်များသုံးကာအက္ခရာများဖြင့်မင်းအမှန်တကယ် ၀ တ်နိုင်သောမျက်မှန်တစ်စုံနှင့်အတူရိုက်နိုင်သည်။ မင်းအထူးသဖြင့်စိတ်ညစ်နေရင်မင်းသိတယ်။ (ငါတို့မဆုံးဖြတ်ရ။ ) ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာသောအရာအတွက်နောက်ထပ်စာလုံးပေါင်း D8C ဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့၏အထင်ရှားဆုံးအကြောင်းအရာများနှင့်၎င်း၏ရွှေနှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည် minifigures သုံးခုသည်သဘောတူညီမှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေခဲ့သည်။
7 - ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းခြင်း 10281 Bonsai ပင်
theme: ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု စျေးနှုန်း: £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 အပိုင်းပိုင်း: 878 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
ကမ္ဘာ၏ Lego နှင့် art လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနည်းလမ်းများစွာနှင့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်တိုက်မိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည် Lego Art, ဒါပေမယ့်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်၎င်းသည်ထူးခြားသောရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုအစုံအလင်ပါ ၀ င်သည် 10281 Bonsai သစ်ပင်.
ဒီတစ်ခု ode art သည်းခံခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသေးစိတ်ကိုဂရုပြုရန်လိုသည့်ပုံစံသည်သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုကျိုးနပ်ပါသည်artအထူးသဖြင့်ဖားတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်ဒီ 2-in-1 display model မှာ ၁၁၁ လုံးပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေး။ အလွန်ရှားပါးသောရှုပ်ထွေးပြီးအသိဥာဏ်ရှိသောအစုတစ်ခုဖြစ်သည် LEGO.comဒီတော့ဒီစာရင်းထဲမှာမင်းတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းဖမ်းနိုင်သမျှဖမ်းပါ။
8 - NINJAGO 71741 NINJAGO City ဥယျာဉ်
theme: Ninjago စျေးနှုန်း: £ 274.99 / $ 299.99 / € 299.99 အပိုင်းပိုင်း: 5,685 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
ဒီမော်ဒယ်အလွယ်တကူအများဆုံးများအတွက်ကိတ်မုန့်ကိုယူ Ninjago Zane ၏အထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုနှင့် Chen's Noodle House စသည့်အထင်ကရနေရာများနှင့်အတူကိုးကားထားသောအညွှန်းများသည်နောက်ဆုံးတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည် Lego အုတ်။ ၁၉ အသေးစားရုပ်ပုံများသည်တီဗွီရှိုးမှတိုက်ရိုက်ဇာတ်ကောင်အမြောက်အများကိုပေးစွမ်းသည်။ ဥပမာ - လတ်တလောရာသီများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သောမက်ထရစ်။ ကြောင်းအားလုံးလုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့လျှင်အဖြစ် Lego Group သည်နှာခေါင်းပေါ်သို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရောက်အောင်၎င်းကိုထိုနေ့၌စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Ninjago အသက် 10 နှစ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်ဤသည်အဆုံးစွန်ဖြစ်ပါတယ် Ninjago အစုံ
တစ် ဦး အထင်ကြီးဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအထင်ကြီးအစုံ။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည် - ၁၀ နှစ်ပြည့်အောင်ဆင်နွှဲပါ Lego Ninjago တည်ကြည်ချဲ့ထွင်မှုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေစဉ် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City. ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ရုံအန္တိမဖြစ်လိမ့်မယ် Lego Ninjago set - သုံးထပ်နှင့် ၅,၆၈၅ အပိုင်းအစများသည်၎င်းကိုအဓိကအကျဆုံးအရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အစုံ၏သက်သက်အရွယ်အစားသည်အရာမဟုတ်ပါ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် ကောင်းတာပေါ့၊ ဒါက ၁၀ နှစ်လုံးလုံးပြသထားတာပါ။
9 - Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle
theme: Marvel စျေးနှုန်း: £ 274.99 / $ 299.99 / € 299.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,772 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အကြီးမားဆုံး Lego Marvel ယနေ့အထိသတ်မှတ်သည် - မည်သည့်မက်ထရစ်ကိုသင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ စart ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားကိုရေတွက်သို့မဟုတ်သက်သက်သာ - 76178 နေ့စဉ် Bugle ရုပ်ပြစာအုပ်တည်နေရာကိုယူပြီး၎င်းကိုသင်၏ကြီးထွားမှုသို့ထည့်သွင်းသင့်သော modular building - လိုက်ဖက်သည့်မော်ဒယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည် Lego city.
မှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ပုံကြီးကြီးတစ်ခု၊ မီးခိုးရောင်၊ ကွန်ကရစ်ကျောက်ပြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပင့်ကူသူရဲများနှင့်တောင်တန်းများအများအပြားကိုစားပွဲပေါ်သို့သယ်ဆောင်ပေးသည့်၎င်း၏အသေးစားဓာတ်ပုံ ၂၅ ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနောက်ခံဖြစ်သည်။ Lego Deadpool, Blade နှင့်ပြစ်ဒဏ်၏မူကွဲများ) ။ အဆောက်အ ဦး ၏အပြင်ပန်းအားထိုအက္ခရာများဖြင့်ပန်းချီဆွဲခြင်းသည်ထိုနေရာတွင်တစ်ခုလုံးကိုရှင်သန်စေပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်ထားရှိပါစေမျက်စိကိုဆွဲရန်သေချာစေသည်။
အကုန်အကျများတဲ့အရာ, သံသယ - သို့သော်သင်တစ် ဦး လျှင် Marvel ပရိတ်သတ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
10 - Ideas 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ
theme: Ideas စျေးနှုန်း: £ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,164 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
၂၃ ရက် Lego Ideas အစုံသည် Clemens Fiedler ၏ဒီဇိုင်းဗေဒ၏မူလတင်ပြချက်နှင့်အလွန်ဝေးကွာသွားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်နည်းပညာအရအကြီးမားဆုံးရဲတိုက်နှင့်ဆိုင်သောအရာများမှသွေဖည်မသွားစေသင့်ပါ Lego အစဉ်အဆက်ဖြန့်ချိ (ကတကယ်တော့တစ် ဦး ရဲတိုက်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်) ။
၎င်းသည် Modular Building Collection မှ၎င်း၏အမြောက်အမြားချဉ်းကပ်မှုပုံစံမှရရှိသောအရာများမှအကျွမ်းတဝင်နည်းစနစ်များစွာကိုထုပ်ပိုးထားသည် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ကိရိယာတန်ဆာပလာ။ ဒါကမဆိုလိုပါဘူး 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုသူတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာကြောင့်အဲဒါကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။
ဘို့ Classic Castle ပရိတ်သတ်တွေ၊ p ကိုမြင်တာနဲ့ဘာမှနှိုင်းလို့မရဘူးart palette, ဒီဇိုင်းဘာသာစကားနှင့်အလွန်အကောင်းဆုံး၏အသေးစိတျအာရုံကို Lego ယနေ့အစုံတစ်အလယ်ခေတ် setting သို့သွန်းလောင်းလေ၏။ အတူတူချပြီး 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာသင်သည်အလယ်ခေတ်သို့ရောက်နေသည့်အလားအစစ်အမှန်ဖြစ်သောအရာအားလုံးကိုလက်ခံသည့်အစုံ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ခံစားမိသည် Lego ယနေ့။
ထွက်ခွာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် ဤအလယ်ခေတ်ဘဝ၏ထိပ်တန်းအပိုင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်။
11 - လူကြီးများအတွက် LEGO 10276 Colosseum
theme: လူကြီးများအတွက် Lego စျေးနှုန်း: £ 449.99 / $ 549.99 / € 499.99 အပိုင်းပိုင်း: 9,036 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
ရောမမြို့သည်တစ်ရက်အတွင်းတည်ဆောက်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်းစံချိန်တင်ထားသောအရေအတွက် ၉,၀၃၆ ရှိသည် Lego အပိုင်းပိုင်းကမအလိုတော်ချက်ချင်းသိသာဖြစ်သင့်သည် ၁၀၂၇၆ Colosseum.
အသစ်သောအစဉ်အဆက် Lego ဖြန့်ချိထားသည့် set သည်အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်ထူးခြားသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်ဝီရိယရှိသော၊art ရက်ပေါင်းများစွာ၏။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှတ်ရစရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံဖြစ်မည်ကိုငါတို့ကြင်နာစွာပြောသင့်သည်ထက် ကျော်လွန်၍ သင်မြင်လိုက်ရသည့်အထင်ရှားဆုံးသော display model များထဲမှတစ်ခုမဖြစ်မီထိုင်ခြင်းက Lego Group မှအစဉ်အဆက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်သောအရာအားလုံးကိုအပြီးသတ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတူတကွလာသည် Lego ၏လက်၌န့်အသတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အပိုင်းအစအရေအတွက်ကိုအောင်မြင်နိုင်သည့်အရာ၏ယနေ့အထိအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုထားပါ Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့။ ငါတို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပုံပြခန်း ဒီရှုထောင့်အားလုံးထောင့်ကနေဘယ်လောက်အစစ်အမှန်နှင့်အထင်ကြီးမှာထပ်မံနက်ရှိုင်းသို့သွားသည်။
၎င်း၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ၁၀၂၇၆ Colosseum တစ် ဦး -of-a-kind ဖြစ်ပါတယ် Lego အကယ်၍ သင်သည်လုံလောက်သောသတ္တိရှိလျှင်၊ သင်မြင်နိုင်ရန်ကံကောင်းလိမ့်မည်။
12 - ဟယ်ရီပေါ်တာ 71043 Hogwarts ရဲတိုက်
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ စျေးနှုန်း: £ 349.99 / $ 399.99 / € 399.99 အပိုင်းပိုင်း: 6,020 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
တစ်ခုချင်းစီကို set တစ်ခုရှိပါက ဟယ်ရီပေါ်တာ ပန်ကာ - Lego စုဆောင်းသည်ဖြစ်စေမပိုင်ဆိုင်သည်လိုသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်။ အပိုင်း ၆,၀၂၀ ရှိပြီးအမြင့် ၅၈ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၆၉ စင်တီမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုနေရာ၏အပြီးသတ်အသေးစိတ်အပန်းဖြေမှုဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ စီးရီး။ ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးတွင်မော်ဒယ်လ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာများစွာရှိခြင်းကြောင့်တည်ဆောက်မှုကိုမလေးစားရန်၊ ရုပ်ရှင်စီးရီးမှစစ်မှန်သောရဲတိုက်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားသည့်ရိုက်ချက်များကိုပြန်လည်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဟယ်ရီပေါ်တာပြန်သွားသည် Lego ယခင်အစုံများ၌အမှန်တကယ်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုအချို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည် - 759684Privet Drive ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း ၂၀ ကိုကျဉ်းမြောင်းစွာလွဲချော်စေသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းသည်အခင်းအကျင်းသည်အသစ်တီထွင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အရာဖြစ်သည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် Lego Group ၏အကောင်းဆုံးသောရဲတိုက်နေရာ၊ ဤမော်ဒယ်လ်မှာတစ်ကြိမ်ထက်မကရောင်းခဲ့ရသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ LEGO.com.
13 - Star Wars ၇၅၃၀၈ R75308-D2
theme: Star Wars စျေးနှုန်း: £ 179.99 / $ 199.99 / € 199.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,314 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
၂၀၁၂ ၏ ၁၀၂၂၅ R2012-D10225 ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးမွမ်းမံထားသောဗားရှင်းအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Lego Group ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဂလက်ဆီ၏အထင်ကရ astromech droid ကိုယူ ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ယင်း၏အလံကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရသောမူလမော်ဒယ်လ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အပင်အဖြစ်စိုက်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပျက်ပြားသွားပါကဗေဒ၏ထုံးစံ၌အစားထိုးသည်ထက်၊ Star Wars buildable ဇာတ်ကောင်များ၏ဆောင်ပုဒ်၏ကြီးထွားလာစာရင်း။
သို့သော်၎င်းသည်ကျန်ရှိနေသောအရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖျော့ဖျော့အားနည်းချက်မဟုတ်ပါ။ ၇၅၁၈၇ BB-75187 တကယ်တော့နီးပါးperfectlyုံထိုင်တော်မူ၏ Artဦး ဦး (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သက်သေအထောက်အထားအဘို့။ ) ပြီးတော့နေစဉ် ၇၅၃၀၈ R75308-D2 ဒီစာရင်းအပေါ်အစုံအများစုနှင့်မတူဘဲ၌တည်ရှိပါလိမ့်မယ်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Lego ဒီ Droid ကို Group ၏အုပ်စု၏နောက်ဆုံးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးeကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အလှမ်းဝေးသည်xtraကြောင်း - အရေးကြီးသောယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲအသေးစိတ်သာမန်ပမာဏ Lego DNA ကို။
ထွက်ခွာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤသည်သင်၏ထိပ်အနီးဖြစ်သင့်တယ် Star Wars စာရင်းစာရင်း…
၄ - Art 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ
theme: Art စျေးနှုန်း: £ 229.99 / $ 249.99 / € 249.99 အပိုင်းပိုင်း: 11,695 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အကြီးဆုံး Lego အချိန်အလုံအလောက်သည် ၁ × ၁ ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်များများမှတစ်ဆင့်ထိုစံချိန်ကိုသာရရှိနိုင်သော်လည်းဤစာရင်းတွင်နေရာတစ်ခုရထိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်မျှစွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည်ကိုမလျှော့ချသင့်ပါ 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ ဘယ်အချိန်မှာပြည့်စုံတယ်၊ နံရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သမုဒ္ဒရာထဲကစားပွဲဆီကိုယူဆောင်လာမယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများ။
ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့်အပြင်အဆင်သည် Bathymetric မြေပုံကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်artသမုဒ္ဒရာ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင် - နက်ပြာရောင်သည်အနက်ရှိုင်းဆုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်artပိုမိုတောက်ပသောအရောင်များသည်သမုဒ္ဒရာ၏အလယ်တွင်ရှိသည်။ သို့သော်သိပ္ပံနည်းကျသောအရာများကိုသိပ္ပံနည်းကျထိန်းသိမ်းထားရန်မလိုအပ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကဆောက်လုပ်သူများအားကြွေပြားများပြားစွာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးရန်အားပေးသည်။ အဖြူရောင်ဘောင် (ကျန်ကြွင်းသောအရာမှသိသိသာသာဆနျ့ကငျြဘအတွက်) Art line-up ရဲ့အနက်ရောင် border) 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ အကယ်စင်စစ်အလွန်အထူးတစ်ခုခုသို့တည်ဆောက်။
15 - လူကြီးများအတွက် LEGO 10295 Porsche 911
theme: လူကြီးများအတွက် Lego စျေးနှုန်း: £ 119.99 / $ 149.99 / € 129.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,458 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အဆိုပါ Lego Group ၏နောက်ဆုံးပေါ် Creator Expert (သို့မဟုတ် 18+) မော်တော်ယာဉ်နောက်ဆုံးတွင် Porsche ခြံသို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ် နည်းပညာ နှင့် Speed Champions ပရိသတ်များသိကြလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော 911 ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ is ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှာတော့ဒီအရွယ်အစားကြီးတဲ့ကားတွေထဲမှာ 2-in-1 အစုံရှိခဲ့တယ် 10295 Porsche 911 Turbo coupe (သို့) Targa convertible အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလွန်အေးမြသောကား၏နှစ်ဆယ့်နှစ်ရာမကသော Porsche သမိုင်းတွင် aplomb နှင့်ပေါင်းကူးလိုက်သောကြောင့်သင့်ခွေးသည်နှစ်ဆပိုများလာသည်။ လိမ္မော်ရောင်အနက်ရောင်သည်အတွင်းပိုင်းတွင်လှပသောအဖြူရောင်အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်နေသည်။ ၁၀၂၈ Ferrari F10248 အနီရောင်၊ ၁၀၂၂၂ Mini Cooper MK VII ၏အစိမ်းရောင်နှင့်စသည်ဖြင့်ဤ subtheme အတွက်အရောင်သစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၏အတွေ့အကြုံကိုခွင့်မပြုပါနဲ့ ခဏတာလက်ဆောင် - နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ မင်းကိုတားဆီးပါ - ဒါကဝိညာဉ်ရေးရာဆက်ခံသူပဲ 10265 Ford ကား Mustang ဒီဇိုင်းပုံစံကတော့အကောင်းဆုံးပါဘဲ Lego Group မှပိုကြီးတဲ့မော်တော်ယာဉ်များ။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်တစ်ချိန်ကကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာအဆင့်တွင်ရှိခဲ့သော်လည်း 10295 Porsche 911 တကယ်တော့ဒီနေ့စျေးသက်သာတဲ့ ၁၈+ စုံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးပေါင် ၁၁၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁၄၉.၉၉ / ယူရို ၁၂၉.၉၉ အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တည်ဆောက်မှုနဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကိုပေးစွမ်းသည်။
16 - လူကြီးများအတွက် LEGO 40516 လူတိုင်းသည် Awesome ဖြစ်သည်
theme: လူကြီးများအတွက် Lego စျေးနှုန်း: £ 30.99 / $ 34.99 / € 34.99 အပိုင်းပိုင်း: 346 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
အရာအားလုံးအကြောင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, အ Lego LGBTQIA + အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်အုပ်စု၏ပထမဆုံး ၀ တ်စုံသည်။ ၎င်းသည်တမင်တကာတက်ကြွစွာအရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်အဆင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော Philadelphia တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောရှစ်ထပ်ပါမာနအလံကိုထင်ဟပ်ပြခြင်းဖြင့်လူမျိုးစုအသီးသီး၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုကိုယ်စားပြုရန်အတွက်အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်များဖြင့်ဂုဏ်ယူ ၀ င်စားခြင်းနှင့်လိင်ကျားမာခြင်းအလံများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းတွင်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၃၄၆ ခုသောအပိုင်းအစများသည်၎င်း၏ monochrome အသေးစား ၁၁ ခုအတွက်အခြေခံနောက်ခံအဖြစ်သို့တည်ဆောက်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာနဲ့ပြသထားတာပါcity တကယ်တော့အဲဒါကိုပိုပြီးလွယ်ကူအောင်လုပ်တယ်၊ အဲဒါကဒီလိုမျိုးကြေငြာချက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်တယ်၊
17 - Ideas 21318 သစ်ပင်အိမ်
theme: Ideas စျေးနှုန်း: £ 179.99 / $ 199.99 / € 199.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,036 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
သင်သိခဲ့ပါ, မော်ဒယ်များမှတင်သွင်း Lego Ideas မပိုနိုင် 3,000 အပိုင်းပိုင်း? ပရိသတ်တွေအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ် 21318 သစ်ပင်အိမ် တရားဝင်ထုတ်ကုန်အဖြစ်။ ၎င်းသည်အခင်းအကျင်း၏အဓိကအကျဆုံးအရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝနှင့်အရောင်အသွေးစုံသောမော်ဒယ်လ်ကိုတည်ဆောက်ရာ၌ ၃,၀၃၆ အပိုင်းအစများမှတစ်ခုမျှမဖြုန်းတီးပါ။
ဤပုံစံသည်အလွန်လှပစွာရရှိသောအရာသည်ပုံသဏ္imagesာန်ကို ဖြတ်၍ ထုတ်လွှင့်ရန်မလွယ်ကူသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပင်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးငယ်ပုံတူပန်းချီကားများအထက်တွင်ရှိသောအကိုင်းအခက်များနှင့်အခန်းများသို့မထွက်မီ။ ကွဲပြားခြားနားသောအညိုရောင်အရောင်များနှင့်ဒြပ်စင်ပုံစံမျိုးစုံတစ် ဦး ရောနှောအော်ဂဲနစ်အတွက် masterclass ပေးသည် Lego အဆောက်အဦ။
ဤနေရာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အသေးအဖွဲများသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာဆောင်ရွက်သည်။ ငါတို့ထဲမှလူအနည်းငယ်သည်ဇိမ်ခံသစ်ပင်အိမ်ရာတွင်တည်းခိုရန်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ 21318 သစ်ပင်အိမ် ဆန္ဒပြည့်စုံလိုသည်မှာအလှဆင်ထားသောအကိုင်းအခက်များပတ်လည်ဝိုင်းနေသောကြောင့်လှေကားထစ်များမှအခန်းသုံးခန်းအထိသစ်ပင်ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ်လည်ကြိုးတန်းတံတားနှင့်လသာဆောင်သို့လှည့်ပတ်နေသည်။ ဒုတိယအရွက်ဒြပ်စင်များ - စိမ်းလန်းစိုပြေသောနွေရာသီသစ်ပင်များအတွက်အစိမ်းရောင်အပိုင်းအစများ - ဆောင်းရာသီရောင်စုံအရွက်များ။ အချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်အေးလက်အေးရှိပြီးဘဝအသစ်ကိုထိုကဲ့သို့သောအံ့သြစရာကောင်းသည့်ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အသက်သွင်းသည်။
21318 သစ်ပင်အိမ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Ideas သတ်မှတ်ပြီးသူတို့သည်ခန့်မှန်းရခက်သည့်သက်တမ်းတိုတောင်းသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ ၂၀၂၀ အကုန်အနားယူမှအနားယူသည်။ ထိုသို့သောလူကြိုက်များမှုမှာနို ၀ င်ဘာလတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည် 2021ပြီလ XNUMX အထိ။ အဆိုပါ Lego Group သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ပြီး၎င်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည် - သူတို့သည်ပုံသွင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရာတွင်ပုံပျက်နေပုံရသည်။ မနှိုင်းယှဉ်။
18 - လူကြီးများအတွက် LEGO 10292 The Friends Apartments
theme: လူကြီးများအတွက် Lego စျေးနှုန်း: £ 134.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 2,048 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
သင်ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာတက်လိုက်လျှောက်သလဲ? Lego Ideas မော်ဒယ်လို 21319 ဗဟို Perk? ၎င်း၏ခြေရာကိုနှစ်ဆနှင့်မတစ်ခုတည်ဆောက်ပေမယ့်နှစ်ခု ap တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်artMonica နှင့်ရာခေလ၊ Joey နှင့် Chandler တို့ဖြစ်သည်။ 10292 အဆိုပါ Friends Apartments စကားစု၏အဓိပ္ပာယ်တိုင်းတွင်၎င်းကိုယခင်နှစ်ပိုင်းတွင်နှစ်ဆတိုးသည်။
အပိုင်း ၂,၀၄၈ ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်များ၏အသေးအဖွဲများအပါအ ၀ င် Janice ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ရုပ်ပုံကားချပ်အပါအ ၀ င်အရာအားလုံးသည် Friends ပန်ကာကဆက်ခံဖို့လိုချင်တယ် 21319 ဗဟို Perk။ ဘယ်ဟာကိုသင်မ ၀ ယ်ဘူးဆိုရင်သင်နဲ့အတူကျိန်းသေရွေးသင့်ပါတယ် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments - ပြဇာတ်ကိုကြည့်ရှုနေစဉ်နှစ် ဦး စလုံးတည်ဆောက်ခြင်းထက်ချိုသောပေါင်းစပ်မှုမရှိပါ။
19 - Creator 3-in-1 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်
theme: Creator 3-in-1 စျေးနှုန်း: £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,426 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
2020 ၏နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်လျှင် Lego ပင်လယ်ဓားပြများ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ နှင့် 31109 ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘော, 2021 ကျိန်းသေ၏နှစ်ဖြစ်၏ Lego ရဲတိုက်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဲဒီမှာရှိ၏ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ယခုသင်ဤစာရင်းကိုထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်) Lego Group မှအခြားအတူတက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် Creator 3-in-1 တစ် ဦး ထံအပ်နှံထား classic ခေါင်းစဉ် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်.
သင့်ရဲ့ Lego ဘတ်ဂျက်သည်ရံဖန်ရံခါတွင်ထက်များစွာသွားသည် Creator 3-in-1, အခြားမူလတန်းဖို့တည်ဆောက်အဖြစ်ရဲတိုက်မျှော်စင်နှင့်အလယ်ခေတ်စျေးကွက်လုပ်ရပ်အဖြစ်, ဒီမှာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် classic ရဲတိုက် layout ။ ထိုအဓိကမော်ဒယ်ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်၏ ၆၀၄၄ Black Falcon ၏ခံတပ်တွင်အသေးစားပုံစံနှင့်အနက်နှင့်အဝါရောင်အဆောက်အအုံပေါ်တွင်အခြေပြုသည်။ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဝါရင့်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တစ် ဦး ထက်ပိုပြီးနည်းလမ်းရှာသင့်တယ်။
20 - 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို
theme: Ideas စျေးနှုန်း: £ 109.99 / $ 119.99 / € 119.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,969 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်မျှော်လင့်မထားသောဆုကြေးငွေသည်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည် Lego Ideas 92176 - အသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်နံပါတ်အောက်တွင်ဖြန့်ချိ NASA Apollo Saturn V ကိုသတ်မှတ်ထားသည်၊ သို့သော်မဟုတ်လျှင် ၂၀၁၇ မူရင်းအစု၏ ၂၁၃၀၉ ကိုရေတွက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Lego Group သည်ဤကဲ့သို့သောပြန်လည်ပြissuesနာမျိုးကိုဖြေရှင်းရန်ခဲယဉ်းသည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သောနှစ်သုံးနှစ်ခွဲကာလက၎င်း၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဝယ်လိုအားရှိခဲ့သည် ဒီအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်၏။
အတွင်းပိုင်းသည်အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ထားသောတည်ဆောက်ပုံကြောင့်၎င်းစက်သည်ကျော်ကြားသော Saturn V ဒုံးပျံအားအံ့သြလောက်အောင်ကြီးမားသောမော်ဒယ်လ်တွင်ကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ မူလပန်ကာဒီဇိုင်နာ၏တင်သွင်းမှုမှ Ideas သောရုံခြောက်ပတ်အတွင်းရန် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်၎င်းကိုကစားဖော်နှင့်သက်ဆိုင်သောတရား ၀ င်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ များစွာသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းဗဟုသုတများစွာသည်ရှည်လျားသောပြွန်တစ်ခုသာဖြစ်သင့်သောအရာဖြစ်သည်။ 21309 နှင့်ယခု 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို ဒါထက်အများကြီးပိုဖြစ်ပြီး, ဖြစ်ပါတယ် အထင်ကရမော်တော်ယာဉ်၏တရားဝင်အခမ်းအနား အာကာသခရီးသွားသမိုင်းမှာ - မလွဲမရှောင်သာဖြစ်သည် Lego အစုံ
ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်အပေါ်ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရခဲ Lego အစုံလိုက်သုံးပြီး၊ ဤပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်မည်မျှကြာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ထို့ကြောင့် lift-off မတိုင်မီလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
ဤစာရင်းသည်အကောင်းဆုံးအယောက် ၂၀ ကိုထင်ဟပ်စေရန်ပုံမှန်မွမ်းမံသည် Lego ၏ယူကေဗားရှင်းအပေါ်လက်ရှိရရှိနိုင်အစုံ LEGO.com။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ခုသည်ထိုနေရာတွင်ရောင်းချပါက restocked သည်အထိစာရင်းမှပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မည်။ အစုတခုအငြိမ်းစားယူလျှင်, သူလည်းစာရင်းထဲကထွက်လာပါတယ်။
ဤတွင်များအတွက်အငြင်းပွားမှုအချို့အစုံဖြစ်ကြသည် Lego Buy List ကိုထည့်ပါဒါပေမယ့်သူတို့အဘို့ စတော့ရှယ်ယာထဲက ၏ဗြိတိန်ဗားရှင်းအပေါ် status ကို LEGO.com (အခြားနယ်မြေများမှရရှိနိုင်မှုသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရှိနေသည့်နေရာတွင်ရှိသေးလျှင်ကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ) ဤနေရာတွင်စာရင်းပြုစုထားသည့်မကြာသေးမီကအငြိမ်းစားပြိုင်ဖက်များလည်းရှိနိုင်သေးသည်။
Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ - Lego ဗြိတိန်သီးသန့်: ရောင်းကုန်ပြီ
Batman ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile - Lego ဗြိတိန်: ရောင်းကုန်ပြီ အမေဇုံ: ယခုရရှိနိုင်
Ninjago ၇၁၆၉၉ Thunder Raider - Lego ဗြိတိန်: အငြိမ်းစား အမေဇုံ: ယခုရရှိနိုင်
အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်270840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်! - Lego ဗြိတိန်: အငြိမ်းစား အမေဇုံ: ယခုရရှိနိုင်
Ideas 21309 NASA Apollo Saturn V - Lego ဗြိတိန်: အငြိမ်းစား အမေဇုံ: ယခုရရှိနိုင် - 92176 NASA Apollo Saturn V အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်